ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem]
1 ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 11th May 2010, 5:12 pm
ကျွန်တော့် Motherboard က P5KPL AM series ပါ ...video ကို ကျော်လို့မရလို့ပါ။ ကျော်လိုက်ရင် စက်က restart ကျကျသွားတယ်ဗျ ။ ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး။
စက်၄ လုံးစလုံးက ဒီဘုတ်အမျိုးအစားပဲဗျ။ တစ်ခြားစက်တွေက ဘာမှ မဖြစ်လို့ပါ၊ ဘုတ်ကြောင့်များလားမသိဘူး။ သိတဲ့သူများ ပြောပြပေးကြပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 11th May 2010, 6:22 pm
Memory နဲ့ Graphic က ဘယ်လောက်လဲ မသိဘူး။ [You must be registered and logged in to see this image.]
3 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 14th May 2010, 5:30 pm
Memory က2Gb ပါ .. Graphic ကတော့ build in ပါ။
4 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 14th May 2010, 6:15 pm
တခြား Media Player နဲ့ဖွင့်ရင်ရော အဲဒီလိုမျိုးပဲလား
5 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 14th May 2010, 8:10 pm
Graphic နဲလို ့များလား။
6 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 17th May 2010, 8:36 pm
တခြား software တွေသုံးရင်ကော Restart ကျလားအစ်ကို။ မကျရင်တော့ ဖြစ်တဲ့စက်က memory ကို တခြားဘာမှမဖြစ်တဲ့စက်မှာတပ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါလား၊ restart ခဏခဏကျတာ memory ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မရရင် CMOS ထဲက Hardware monitor ကိုဝင်ပြီးတော့ CPU Temperature ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပါ။ Tempearature များနေရင်လည်း restart ကျတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ built in Graphic က ကတ်စိုက်တာလောက် သုံးရတာအဆင်မပြေပါဘူး။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 17th May 2010, 9:01 pm
အပေါ်မှာပြောသွားတာတွေက စုံတော့စုံနေပြီ... ကာယကံရှင်ရဲ့ reply လေးပဲကျန်တယ်.... ကျနော်တစ်ခုဖြည့်ပြောချင်တာက KM player နဲ့ဆို အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်... ဒါကျနော့် ကိုယ်တွေ့ပါ... တစ်ခြားဟာတွေနဲ့က မဖြစ်သလောက်ရှားတယ်... နောက်ပြီးပြောစရာရှိတာက video တွေကိုဘယ်ကနေဖွင့်တာလဲ... စက်ထဲကလား ... ??? ဒါမှမဟုတ် CD ROM ကနေလား.. ??? CD ကနေဆိုရင်လည်း ဖြစ်တတ်တယ်... HDD ကနေဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ... ပြောတတ်တော့ဘူးဗျာ...
8 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 18th May 2010, 2:27 pm
Memory က2Gb .. Graphic ကတော့ build in ဆိုရင် ရလောက်ပါတယ်..အကို့ mother
board နဲ့ ကျွန်တော့် mother board ကတူတယ်..ကျွန်တော်ကတော့ Graphic စိုက်ထားတယ်
512 ပါ..35000 လောက်ဘဲရှိမယ်...Jetaudio နဲ့ ဖွင့်ကြည့်ပါလား..ရရင်ရမှာပေါ့..ရီစတက် ဖြစ်တာက စက် က Fun မနိုင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်..ကျွန်တော်တော့သေသေချာချာမပြောတက်ဘူး
pooqee တို့ zaw min တို့ကိုမေးကြည့် သူတို့ကစက်ပြင်ဆရာတွေလေ... [You must be registered and logged in to see this image.]
9 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 2nd June 2010, 10:12 am
Video ကို CD Drive နဲ့ ကြည့်တာလား? CD Drive နဲ့ ကြည့်လို့ ကျော်တဲ့အချိန် restart ကျတယ်ဆိုရင်တော့ Power Supply ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ကျော်တဲ့ အချိန်မှာ CD Drive မော်တာလည်ပတ်နှုန်းမြန်သွားတယ်လေ၊ အဲဒီတော့ power လည်း စားတာများသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် restart ကျကျသွားတာပါ။ ဒါမှ မဟုတ် တခြား Drive တွေကကြည့်တယ်ဆိုရင် တော့ restart ကျတာ ရှားပါလိမ့်မယ်။ CPU fun လည်ပတ်နှုန်း မမှန်ရင်လည်း restart ကျကျသွားတတ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး restart ကျရင် စက်ဖွင့်ပြီး ၁၅ မိနစ် နာရီဝက်လောက်နေမှ ကျကျသွားတတ်တာပါ။
Memory မကောင်းတာကြောင့် restart ကျရင် OS တတ်ပြီးတာနဲ့ခဏလေးနဲ့ ချက်ချင်း ကျကျသွားတတ်တယ်။
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ခင်ဗျား စက်က power supply မနိုင်လို့ restart ကျတယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျ။
--- မှားသွားရင်လည်း နားလည်တဲ့သူတွေက ပြန်ရှင်းပြပေးပါဦး -----
10 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 25th June 2010, 10:33 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-01-12
ကွန်ပျူတာ က can not find script file <C:\_window\_system32\_killVBS.vbs>ဆိုတဲ့MESSAGE ပေါ်ပေါ်လာပီး restart ခဏခဏကျနေပါတယ်
safe mode ကိုတော့ ၀င်လို့ရပါတယ်
repair လုပ်ပီးလည်း ပြန်ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်
11 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 6th July 2010, 2:17 pm
အကောင်းဆုံးကတော့ OS ပြန်တင်လိုက်ပါ့လား
12 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem] on 16th July 2010, 6:13 pm
ဝင်းဒိုး HARDISK မကောင်းရင်လည်းကျနိုင်သလို ဝင်းဒိုးက Bad sectors တွေများလာရင်လည်းကျနိုင်ပါတယ်
တကယ်လည်းထင်လောက်စရာပါဘဲ အညိုရောင်ကြီးကို ဟီးဟီး ရီတာနော် GRAPHIC CARD
လွတ်နေရင်လည်းဖြစ်တက်ပါတယ် .....MotherBoard က capacitor
.. ကိုယ်က etectrical
ကြောင့် (သို့)GRAPHIC ကြောင့်လို့တော့အနော်ယူဆတယ်
ကျွှန်တော့်ဆိုဒ်လေးလည်းလာလည်ကြပါဦးခင်ည [You must be registered and logged in to see this image.]
13 Re: ကွန်ပျူတာ restart ခဏခဏကျလို့ [Problem]